ary izay no azo hanazavana ny fiverenana amin’ny fanibohana indray ao amin’ny Renivohitr’i Madagasikara. Tena nanao fahadisoana be I Madagasikara, raha ny zava-misy dia tsy manana fomba fijery mivelatra momba ny fitantanana valanaretina na koa ny fitantanana firenena ny Filoha Rajoelina, hoy I Saindoux Dembele, isan’ireo nanaovan’ny fahitalavitra NTV fakan-kevitra. Ankehitriny, dia tena tsy fahombiazana no miseho, ary henatra ho an’I Afrika manontolo io, hoy ny fanehoan-kevitra. Nilaza kosa ny Minisitry ny serasera sy kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy omaly, fa tsy mbola misy porofo hilazana fa tsy mahomby io. Ny mifanohitra amin’izany aza no miseho satria saika nandray CVO avokoa ny ankamaroan’ireo sitrana, hoy izy. Misy antony hafa, tsy afaka nandray CVO noho ny aretina mitaiza toy ny diabeta, tosidra ambony,… ny ankamaroan’ireo namoy ny ainy, raha ny fanazavany. Nisy moa ny fizarana CVO teto Antananarivo natomboka tamin’ny Boriborintany voalohany sy fahadimy.